Quddus warshad farshaxan farshaxan oo laga dhisayo gobolka Lipetsk - majaladda "Nidaamka Baradhada"
Gobolka Lipetsk, oo ku yaal aagga dhaqaalaha gaarka ah ee heer gobol ee magaalada Dankov, marxaladda injineernimada iyo naqshadeynta dhismaha warshaddii ugu horreysay ee Ruushka ee soosaarka warshadaha ee maaddooyinka prebiotic. Waqtigaan, inta badan qalabka warshadda waxaa lagu rakibay aagagga helitaanka, dhaqida, goynta iyo faafitaanka alaabta ceeriin.
Dhameystirka dhismaha marxaladda koowaad ee warshadda iyo bixinta isgaarsiinta waxaa loo qorsheeyay guga sanadka 2021. Shirkadda "EastAgro Don" ayaa u qoondeysay qiyaastii lix bilood si ay "u tijaabiso" tikniyoolajiyadda wax soo saarka, iyo deyrta sanadka 2021, warshadda ayaa la filayaa inay gaarto mugga warshadaha.
Awoodda wax-qabad ee warshadda wax-soo-saarka waxay noqon doontaa illaa 500 tan oo Yeruusaalem ah artichoke maalin kasta, iyo mugga sanadlaha ah ee alaabada ugu dambeysa - illaa 15 kun oo tan.
Alaabooyinka waxaa loo geyn doonaa noocyo kala duwan oo soosaarayaasha cuntada ah, oo ay ku jiraan PepsiCo Russia.
Tags: Gobolka Lipetsksoo saarista walxaha prebioticJerusalem artichoke